Lisitr'ireo mpiady saron-tava 75 tsy hay hadinoina tamin'ny tantaran'ny WWE - Wwe
75 mpiady WWE misaron-tava izay nilalao olona tsy hay hadinoina
Ny sasany amin'ireo mpihetsiketsika lehibe indrindra amin'ny tantaran'ny WWE dia nitafy saron-tava ho ampahany amin'ny toetran'izy ireo.
Ny maska ​​dia misy dikany lehibe amin'ny endrika tolona matihanina any Lucha Libre any Mexico. Luchadores dia miavaka matetika amin'ny saron-tava nentin-drazana. Ny fampidirana sarontava amin'ny kolotsaina Lucha Libre dia nanomboka tamin'ny voalohan'ny taonjato faha-20. Na izany aza, ireo mpihetsiketsika any ivelan'i Mexico dia nampiditra azy io ho ao anatin'ny gimikin'izy ireo ihany koa.
WWE dia nanasongadina mpanao ady totohondry misaron-tava marobe nandritra ny tantara, ny sasany dia tian'ny mpijery raha ny hafa mankahala. Andao isika hijery ohatra vitsivitsy malaza.
# 1 Rey Mysterio
ny fomba fangatahana fanampiana amin'izao rehetra izao
I Rey Mysterio dia azo lazaina fa ilay mpiady tototra malaza indrindra amin'ny fotoana rehetra. Na dia efa am-polony taona maro aza i Lucha Libre, dia i Mysterio no mpitondra ny sainam-pirenena mpiady toy izany tamin'ny taonjato faha-21.
Niditra tao amin'ny WWE i Mysterio tamin'ny 2002, ary nifanindry tamin'ny fiakaran'ny internet izany. Ny fitomboan'ny fahazoana miditra amin'ny seho WWE dia nahatonga an'i Mysterio ho solontena tonga lafatra amin'ireo mpiady Meksikana misaron-tava ho an'ny mpijery mahazatra.
# 2 Kane
Kane, rahalahin'i Undertaker
Kane dia nisy fiatraikany lehibe tamin'ny faramparan'ny taona 90. Ilay demonia nisaron-tava dia naseho ho rahalahin'i The Undertaker tamin'ny taona 1997. Niaraka tamin'ireo mpankafy, na i The Undertaker aza dia natahoran'i Kane tamin'ny voalohany.
ahoana ny fomba hifanatrehana olona miteny ao aorinao
Kane dia lasa iray amin'ireo kintana WWE fantatry ny maro hatramin'ny nanombohany. Na dia nitolona tsy nisy saron-tava aza izy nandritra ny fihazakazahana maromaro, dia malaza kokoa amin'ireo mpankafy ny kinovan'ny saron-tsoan'i Kane.
# 3 Olombelona
Paul Bearer (ankavia) sy ny Olombelona (ankavanana)
Mick Foley dia naneho tarehin-tsoratra maromaro tao amin'ny WWE. Amin'ny maha-persona Mankind persona azy, i Foley dia ampahany lehibe tamin'ny vanim-potoanan'ny toe-tsaina.
Mahaliana fa ny sarontava masin'i Mankind dia iray amin'ireo prototypes tamin'ny fijerin'i The Undertaker rehefa notapahin'ity farany ny taolam-bolony tamin'ny 1995.
Ny olombelona dia ampahany tamin'ny helo tamin'ny lalao nifanandrinana tamin'i The Undertaker tao Mpanjakan'ny peratra 1998. Mijanona ho iray amin'ireo lalao adala sy malaza indrindra amin'ny fotoana rehetra izy. Ny olombelona dia tafiditra tamin'ny fotoana tsy hay hadinoina nandritra ny taona maro, ka nahatonga azy ho olona misaron-doha amin'ny tantara WWE.
# 4 Ray
Vader dia iray amin'ireo kintana izay nalaza noho ny asany ivelan'ny WWE. Ny lohateny Mastadon SummerSlam 1996 niaraka tamin'i Shawn Michaels. Izy koa dia anisan'ny lalao eken'ny Fatal-Four-Way El-Way notsikeraina kritika tamin'ny Ao an-tranonao hetsika tamin'ny 1997.
Taorian'ny nandaozany ny WWE tamin'ny 1998, dia mbola nanao fisehoana tsindraindray ho an'ny fampiroboroboana i Vader nandritra ny taona maro. Noho ny zava-bitany teo amin'ny tontolon'ny tolona matihanina dia fantatra i Vader ho iray amin'ireo mpiady malaza misaron-tava amin'ny fotoana rehetra.
# 5 Ilay Rivo-doza
Ireo mpihetsiketsika misaron-tava amin'ny WWE dia matetika iharan'ny tantara an-tsary mahatsikaiky na hatsikana. Ny sasany amin'ireo hevitra dia mandeha ary ny sasany kosa tsy mandeha. Ny Hurricane dia mijanona ho ohatra tsara ho an'ny mpilalao hatsikana izay nahomby.
ny fomba hiatrehana ny sakaiza mandainga
Ny saron-tava ny Hurricane dia ao anatin'ny fitafiany maherifo. Gregory Helms dia niady tamina vanim-potoana lehibe toa an'i The Rock, nandresy an'i The Great nandritra ny lalao iray tamin'ny 2003. Nahafinaritra ihany koa ny fiaraha-miombon'antoka tamin'ny mahery fo niaraka tamin'i Molly Holly sy Rosey.
Mpilalao sarimihetsika malaza misongadina amin'ny tantaran'ny WWE
Mbola tiako foana i Cody Rhodes nefa tsy dia tsara loatra, mijery tsara tanteraka eo ambanin'ny saron-tava mazava, miantsoantso hoe 'AZA JEREO MEEEEEEE!' toy ny karazan-honahona izy pic.twitter.com/qG31DijyCU
- SuperNerdLand: Kaonty mpankafy an'i Lance Reddick (@SuperNerdLand) 30 Janoary 2018
Aldo Montoya (Justin Credible)
Avatar (Al Snow)
Batman - amin'ny WWWF
Masinina lehibe (Blackjack Mulligan)
The Black Knight (Jeff Gaylord, Barry Horowitz)
Black Phantom (David Heath / Gangrel)
Tigra Mainty (Marc Rocco)
Blue Blazer (Owen Hart)
The Blue Knight (Greg Valentine)
Calgary Kid (The Miz)
CM Punk - tamin'ny 2010
Cody Rhodes - tamin'ny 2011
The Conquistador (Jose Luis Rivera, José Estrada Sr., Edge, Christian, Matt Hardy, Jeff Hardy, Rob Conway, Eugene, ary Kurt Angle)
MARINA izany, MARINA IZANY! @RealKurtAngle may ny antontam @BaronCorbinWWE ary efa nahavita ny #WWEWorldCup amin'ny #WWECrownJewel ! #Raw pic.twitter.com/WrDGLZzGIB
- WWE (@WWE) 9 Oktobra 2018
Dr. X (Tom Prichard)
El Gran Luchadore (Paul London, Shannon Moore, Eddie Guerrero, ary Kurt Angle)
Ilay Zanaky ny Fanahy
El Olympico - amin'ny WWWF
The Tramp (Elias)
Ilay mpanatanteraka (Killer Kowalski, Big John Studd, Nikolai Volkoff, Buddy Rose, Terry Gordy, Duane Gill, ary Barry Hardy)
Masinina goavambe (André the Giant)
Ny fanadihadiana nataon'i Gene Okerlund dia ny The Machines (Super Machine and Giant Machine) tamin'ny taona 1986. Ilay Super Machine dia i Bill Eadie (Masked Superstar / Demolition Ax), Giant Machine dia Andre. pic.twitter.com/6M8Q4MLQOg
- Rasslin 'History 101 (@WrestlingIsKing) 6 septambra 2020
Ilay Sasuke Lehibe
Hulk Machine (Hulk Hogan)
Kato (Paul Diamond)
Kim Chee (Jim Dalton, Steve Lombardi)
Kwang (Savio Vega)
La Luchadora (Becky Lynch, Deonna Purrazzo, Alexa Bliss, ary Mickie James)
Mace (Dio Maddin)
Max Moon (Konnan, Paul Diamond)
Andriamatoa Amerika (Hulk Hogan)
Andriamatoa NXT (Bo Dallas)
Ilay Tia Tanindrazana
Fanisana (Mia Yim)
The Red Knight (Barry Horowitz, Steve Lombardi)
Repo Man (Manorotoro)
Shadow I (Moondog Rex)
Shadow II (José Estrada Sr.)
Shinobi (Al Snow)
Sin Cara (Luis Ignacio Urive Alvirde, Jorge Arriaga)
Sin Cara Negro (Jorge Arriaga)
Tsarovy rehefa nanova ny jiro ho an'ny fifaninanana sin cara .. #wwe pic.twitter.com/U9Lbvghone
- Kade (@Kadeddt) 9 Janoary 2021
Slapjack (Shane Thorne)
Spider Lady (Ilay Moolah Mahatalanjona)
The Sultan (Rikishi)
Super Machine (Bill Eadie / Ax)
Super Ninja (Rip Oliver)
T-Bar (Dominik Dijakovic)
Tiger Mask I (Satoru Sayama)
The Undertaker - tamin'ny 1995/1996
Venezo fotsy (Peggy Patterson) - amin'ny WWWF
Iza (Jim Neidhart)
Fahombiazana vitsivitsy amin'ireo mpiady tototra misaron-tava ao amin'ny WWE
Nahazo zava-bita isan-karazany tao amin'ny WWE nandritra ny taona maro ireo mpiady misaron-tava. Tiger Mask (Satoru Sayama) nandresy tamin'ny Championship WWF Junior Heavyweight Championship intelo tamin'ny asany.
Ny toetran'ny Tiger Mask dia fitaomana lehibe ho ahy. Sayama (Tiger Mask 1) no maherifoko, ary samy Kanemoto (Tiger Mask 3) sy Tiger Mask 4 no an'i Sempai ho ahy fony aho zazalahy kely tany NJPW tamin'ny 2002. Tiger Mask 4 dia faly indrindra nahita ilay saron-tava voasoratra teo sandriko 🤘 pic.twitter.com/fnVYvzfgFD
naninona i dean ambrose no niala wwe
- 🇺🇸 TJ Perkins 🇵🇭 (@MegaTJP) 17 Oktobra 2019
Tamin'ny Desambra 1972, Mil Máscaras no mpiady voalohany nisaron-tava nifaninana tao amin'ny Madison Square Garden any New York. Tamin'ny 2006, nandresy tamin'ny lalao Royal Rumble i Rey Mysterio ary namorona tantara niaraka tamin'ireo mpiady tototra nisaron-tava tamin'ny WWE. Mysterio koa dia nahazo tompon-daka eran'izao tontolo izao nandritra ny asany.
Amin'ny maha-olombelona azy, i Mick Foley dia nandrombaka ny telo tamin'ireo titre WWE eran-tany. Ny persona misaron-tava azy koa dia ampahany amin'ny iray amin'ireo sokajy avo indrindra amin'ny tantaran'ny RAW - 'This Is Your Life' - ny 27 septambra 1999.
Bray Wyatt dia nihoatra ny sakana tamin'ny famoronana tantara an-tsary tamin'ny WWE satria ilay fiend-ego nosoratany, The Fiend. Noho ny fanampian'ity mpilalao ity dia nanolotra ambaratongam-pitantarana efa mandroso izay tsy mbola fahita tany WWE i Wyatt. Ny lalao Firefly Fun House sy Firefly Inferno dia ohatra tsara amin'izany.
Misaotra ⭕️ pic.twitter.com/NlhvR0rz74
- Bray Wyatt (@WWEBrayWyatt) 21 Desambra 2020
Ny kolontsain'ireo mpiady misaron-tava dia nivoatra nandritra ny am-polony taona maro. Iza no sasany amin'ireo mpiady WWE tianao indrindra amin'ny fotoana rehetra? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany.
ny fomba tsy ho raisina ho azy
mahasarika ahy ny fitenin-tenako
olona manambany ny hafa hampihatsara ny tenany
ahoana no fomba hihaonana amin'ny olona nihaona taminao tamin'ny Internet
mifehy ny ray aman-dreny rehefa olon-dehibe ny fomba hiatrehana
rehefa manomboka misintona ny lehilahy
inona no mahatonga ny olona mangatsiaka am-po